CNC Feer Xiirashada
CNC Laabista Machine
Copper Stick Laaba
Qaybaha Waranka & Qalabka
Qoraalada Xalka Shirkadda
Qoraallada Xalka Shirkadda 2
Qoraallada Xalka Shirkadda3
Diiwaanka Codsiga Shirkadda2
Diiwaanka Codsiga Shirkadda3
Cimilada aadka u daran waxay u baahan tahay shabakado tamar cusub oo sugan
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, Wadamo iyo gobollo badan ayaa soo maray dhacdooyin cimilada “taariikhi ah” oo badan. Duufaanno, duufaanno, Dab kayn, onkod, iyo roob aad u xoog badan ama baraf barafiyay dalagyada, khalkhal geliyay adeegsiga oo sababay dhimasho iyo dhaawac badan, khasaaraha maaliyadeed waa ...
Si loo hubiyo in qof kastaa yeelan doono damaashaad farxad leh oo damaashaad leh, injineeradeena ayaa si adag u shaqaynaya laba toddobaad, taas oo hubinaysa inaan heli doonno badeecad iyo qayb ku filan xilliga soo iibsiga kadib xafladda guga. ...
Tan iyo markii aan dooneynay inaan helno fasaxii Bandhigga Guga Shiinaha bisha Febraayo, shaqada waax walba waxay noqotay mid xasilloon sidii hore. 1. Toddobaadkii hore waxaan dhammaynay in ka badan 70 amarro iibsi ah. Ku dar: 54 cutub oo ...
Shirka 7-aad ee Ganacsiga Pak-China
Hindisaha Wadada Hal Belt One ee Shiinaha, oo looga golleeyahay in dib loogu soo nooleeyo Wadadii Xariirta ee qadiimiga ahayd, ayaa dhalisay isbeddel siyaasadeed oo ka dhacay waddamada Bartamaha iyo Bariga Yurub. iyada oo ah mashruuc hoggaamineed oo muhiim ah, Waddada Dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan waxay heshaa dareen badan ...
Bandhigii 12aad ee Shanghai International Electric And Electrician Exhibition
Waxaa la aasaasay 1986, EP waxaa soo qabanqaabiyay Golaha Korontada Shiinaha, Shirkadda Grid State of China iyo China Southern Power Grid, oo ay iska kaashadeen Adsale Exhibition Services Ltd.
Qalabkii wax -soo -saarka cusub ee kooxda Daqo
Sanadka 2020, shirkadeenu waxay xiriir qoto dheer la yeelatay shirkado badan oo tamarta heerka koowaad ah oo gudaha iyo dibaddaba ah, waxayna dhammaystirtay horumarintii la habeeyay, rakibidda iyo hawlgelinta tiro badan oo qalab UHV ah. Daqo Group Co., LTD., Oo la aasaasay 1965, waa ...